dot SO [.SO]
General Availability Launched on April 1st, 2011
Is diiwaan Gelin
Aad ayaad ugu mahadsantahay xiisayntada .SO .Hadii aad danaynaysid in aad isdiiwangelisid, fadlan buuxi form-ka hoose, inagana waxaan kuu soo diri doonaa ducumentska oo diyaarsan.
fadlan ka raadi hoose faahfaahino kusaabsan iyo siyaasadaha .SO
・qarashka mudada isdiiwan gelinta sunrise waa: USD 90.00 dollar seddexdii sanno.
・Mudada isdiiwangelinta wajiga Land rush qiimeheeda waa: USD 10.00 dollar sanadkiiba.
・Isdiiwangelinta furan waa: USD 10.00 dollar sanadkiiba.
BRIEF SPECIFICATION Open TLD, No restriction, No local presence.
We will provide API(EPP) and WEB interface.
Items required will be the same as modern thick gTLDs.
xiliyada dib u dhigista ・Kudar xiliga dib u dhigista: 5beri.
・Xiliga dib u dhigista hore u cusboonaysiin waa: 45beri.
・Xiliga madax furashada waa: 30beri.
・Waqtiga tirtirada waa : 5beri.
TECHNICAL INFORMATION Registrar Toolkit
The EPP RFCs
3730: Extensible Provisioning Protocol (EPP)
3731: Domain Name Mapping
3732: Host Mapping
3733: Contact Mapping
3734: Transport Over TCP
3735: Guideddnes for Extending EPP
siyaasadaha guud ee isdiiwangelinta
Magaca domainka Sunrise waxa laga yaaba in la diiwangeliyay ugu yaraan 3 sanno ugu badnaan 10 sanno.
Magaca domain ka landrush waxa laga yaabaa in la diiwangeliyay ugu yaraan 1 sano , ugu badnaan 10 sanno.
Magacad domainka Is diiwangelinta furan waxa laga yaabaa in la diiwaangeliyay ugu yaraan 1 sanno ugu badnaan 10 sanno.
2) Hore inta aan lacusbonaysiin:
Domainyada si automatic ah ayuu iskucusboonaysiin dhamaadka mudadooda(taarikhda dhicitaanka) .
3) dhirirka magaca domainka:
Magacyada domainka .SO wuxuu leeyahay ugu yaraan 3 xuruuf ugu badnaan 63 xuruuf dhirir ahan, kuma jirto fiditaan kaasi oo dejisey gareeyeen diiwan xifdinta.
4) xuruuf la ogolyahay:
Keliya waa erayada latin ka ah waa a ilaa z, tirade hal godka ah ama digits iyo xariiqmaha yar ama jiiditama ama hyphens waa la aqbali doonaa ilaa magacyada domain ka caalamiga ah Internationalized Domain Names (IDNs) laga soo daayo.
Waaqtiga meantime ka diiwan ilaalinta ma aqbali doonto ereyada weliba dhawaqa calaamadeed, Cyrillic characters iyo wlm.
Magacyada domainska kubilowda ama kudhamaaada xariiqmaha yar ama jiiditama ama hyphens sidoo kale , booska sedexaad ama afaraad uu so galo hyphens dhamaan waa lamamnuucay.
5) kala xiriirid:
Qofka isdiiwangelinaya waxaa looga baahanyahay in uu keeno informationkiisa lagala xiriiri lahaa oo saxan: isdiiwangeliyaha, maamule, farsamo, biilka sida ku cad policiga, daatada lagala xiriiro qofka isdiiwangeliyay waxa loo bandhigi doontaa WHOIS, marka laga reebo biilkaas.
Xawilaada domainyada diiwanhayayaasha waa 60 beri waxa raaca oo loo ogolaadey in ay abuuraan iyagoo raacaya shuruudaha isdiiwangelinta , waliba raacaya wadooyinka xawilaada kaasoo ay dejiyeen diiwanhayahaal ,taasoo ah xaalad diiwaanhaye uu diiwanhaye kale uu u xawilo karo waxay qaadanaysaa mudo hal sano ah ee magaca domainka noocaas ah.
o	Diiwanhayayaasha markaas ayay charge gareynayaan qofka isdiiwangeliyay mudo hal sano uu siyaado ah.
7) magacyada serveryada:
Domain kasta wuxuu yeelan karaa ilaa iyo 13 magac servero meel kasta inta uu noolyahay.
Domainyada aan lahayn magac server aktif ma ahaandoona , taasoo loola jeedo domainka noocaas ah Epp da ayaa soo daabici doonta DNS zone file ka.
Kani sikastaba ha ahaatee ma saamayndoono muuqaalkeeda ku aadan WHOIS databaseka.
Copyright (C) 2015 SO Registry, All Rights Reserved.